Zeylaci | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Magac: Imaamkii faadilka ahaa ee muxadithka ahaa Jamaalu-diin Abuu Muxammad bin Cabdillaah bin Yuusuf bin Muxammad Al-Xanafi Mad-habkiisu waxuu ahaa Xanafi ee ahaa Al-Masri / Al-zaylaci
Imaamka noloshiisa wax badan lagama qorin sida muuqata, laakiin waxaa cad inuusan ku noolayn Soomaaliya (Zaylac) ee uu asal ahaan ka soo jeedo uun. Waxaa u ku noolaa Masar. In badan ayuu Cilmiga ku dhex jiray waxa uuna wax ka bartay Imaam Najiib Al Xarraani, Al-Fakhr Al-Zaylaci, Al-qaadi Calaau’diin bin Turkmaani iyo ibn Caqiil (Naaxiga) iyo kuwo kale. Waxa uu laazimay mudhaalacad kutubta xadiithka illaa uu ka soo saaray axaadiitha Al Kishaafka Zamakhshari ku jira iyo NasbuRaayah li axadith al Hidaaya. Waxuuna weeleyey weeleyn aad u xeeldheer. Ibn Xajar waxa uu yiri: Waxaa uu ii sheegay sheekheena Al-ciraaqi ah (Zaynu-diin Al-Ciraaqi!) in ay isaga iyo Zaylaci ay wada dhaalacan jireen kutubta axaathiita oo isna uu soo saaray axaadiithta “Al-Ixyaa” (ee Al-Ghazaali) iyo axaadiithta uu Imam tirmidhi ku ishaaray “Al-abwaab” meesha uu Zaylaci ka soo saaray axaadiithta labada kitaab ee kor ku xusan (Kashaaf iyo Hidaaya) ayna is kaashan jireen labadoodu (Zaylaci & Al-Ciraaqi) – Dhayl Dhabaqaat al-xufaadh (
ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي )
Culimadu ka hadlay Al-Zaylaci:
AL-Xaafidh ibn Qadhluubghaa (Xanafi): kitaabka “Munyatul Al-Maci” markii uu ka hadlay rag ka mid ah kuwa ka soo saaray addillooyinka madhabka xanafiga ayuu soo gaaray Al-Zaylaci waxa uuna ka yiri: “Waa ninka ugu “Idhilaaca” badan uguna kulminta badan. Kitaabkiisuna waxa uu markhaati ka yahay inuu wax ka soo guuriyo jumhuurta kutubta axaadtiithta”.
Cabdil Xayi Al-laknawi (kitaabka: Fawaaid Al-bahiya): ” Axaadiithta uu soo saaaray waxa ay daliil u tahay ku xeel dheeranta uu ku xeel dheeryahay fanka xadiithka iyo magacyada ragga” (ee asaaniida xadtiithka). Sidoo Kale ibn Xajar Waxa uu ku amaanay sheekha inuu dhexdhexaadin sameeyay oo uu daliilka cidda khilaafsan si wacan u soo bandhigay.
Waxa uu dhintay Imaamku bishii Muxarram ee 762 ee hijriga (1360 C. E). Alle Ha ajar siiyo wanaaga iyo dadaalka uu ummada u galay. Naxariis iyo Janna rabina ha ku abaal mariyo
WQ Cali Muxammed
from → Imaam Azeylici, Taariikhda Culimada Soomalida
← دروس في علم المصطلح 1
Shamsu-diin A-Dhahabi →